macluumaad Company - Zhejiang Lucky saaraha Co., Ltd
Professional Fish Finder Warshadaha Pionner in China Since 2003
tayo sare leh iyo adeegga wanaagsan ee waa dhaqan. Tani wax soo saarka la yaab leh waxaa si gaar ah loogu talagalay kalluumaysatada hiwaayadda iyo xirfadeed si isku mid ah, si ay u Finder baxay meesha uu kalluunka, si qoto dheer oo dusha hoose oo biyo ah. Isticmaalka technology cajiib ah oo cusub, jiheeyaha kalluunka tani waa qalab ku haboon inuu ku kalluunka kuu keenaan!
La aasaasay sanadkii 2003, Zhejiang Lucky saaraha Co., Ltd waa soo saaraha xirfad iyo khibrad ku takhasusay berrinka kalluumaysiga.
In warshad keenidda R a & D, wax soo saarka, iyo iibka, aan horumariyo wax soo saarka cusub oo sanad kasta, xakameeyo tayada wax soo saarka 'adag, oo ay macaamiisha gudaha iyo dibaddaba.
Sida our dhigyo 'kalluumaysiga nolosha ka dhigaysa fiican "shows, waxaan Lucky waxaa ku laysaan dadka bixiya waayo-aragnimo ugu fiican ee kalluumaysiga iyo xiiso weyn ee nolosha.
saaraha 1.Professional Iyada oo in ka badan 10 sano oo khibrad ah soo saarta ee beerta kalluumaysiga, iyo shaqaalaha si fiican u tababaran, QC adag, iyo iibka xoog iyo R & D kooxda, waxaan ku siin macaamiisha leh tayo sare iyo waxyaabaha xirfadeed.
adeegga 2.Expert Iyada oo wax soo saarka dhamaystiran, farsamo, iyo kooxda iibka, waxaan sameynaynaa iskaashiga nala waayo-aragnimo cajiib ah loogu talagalay macaamiisha. Waxaan had iyo jeer diyaar u yihiin in ay u adeegaan kuu.
maanka 3.Innovative Iyada oo maanka abuurnimo badala wax kasta, waxaan marna la joojin tallaabo our in waxyaabaha creation.New waxaa lagu duraa in suuqa iyo u furan suuqyo cusub oo cajiib ah loogu talagalay macaamiisha our.
qiimaha 4.Competitive Iyada oo tayo iyo sumcad sida shuruud, waxa aanu u kaliyeeli in ay bixiyaan alaabta tayada ugu fiican iyo adeegga ugu dhameystiran for macaamiisha ka lacagta macaamiisha.
2. Waxaan leedahay iibka si fiican u tababaran iyo passional & adeegyada iibka kadib ku hadli kara si faseex ah af Ingiriisiga
3. Waxaan bixinaa OEM adeegyada. Daabacan kartaa logo u gaar ah oo ku saabsan Fish Finder.
4. Waxaan leenahay injineerada aad u khibrad badan, kaa caawin kartaa inaad si fiican u isticmaali Fish Finder
No. 1966, Cuntong Road, Dongxiao Subdistrict, magaalada Jindong Degmada Jinhua, gobolka Zhejiang, Shiinaha
WAQTIGA HORUMARINTA nasiib